त्यहाँ मैले प्रकाशित गरेको एक पत्रिका छ: वायर्ड | Martech Zone
त्यहाँ एक पत्रिका म भुक्तानी गर्छु: वायर्ड
सोमबार, जनवरी 26, 2009 सोमबार, जनवरी 26, 2009 Douglas Karr
मेरा साथीहरूलाई थाहा छ म एक किताब खुल्ला छु। मलाई हार्डकभर पुस्तकहरू मन पर्छ। त्यहाँ भर्जिन रीढ़को क्र्याक जस्तो केही छैन र यसमा ताजा मसीको साथ कुरकुरा पृष्ठको अत्तर। एउटा नयाँ पुस्तकले मलाई सँधै एउटा प्रस्तुतको रूपमा महसुस गर्दछ ... र यो मेरो हो, सबै मेरा हुन्!
म मेरो हार्डकभर स्नोबिशनेसमा काम गर्दै छु, यद्यपि! म मद्दत गर्न सक्दिन तर अपराधीको सबै किताबहरूमा दोषी महसुस गर्दछु जुन मेरो अपार्टमेन्ट वरिपरि घुम्दछन् जुन अरूले पढ्नको लागि योग्य छ जो हार्डकभरको मूल्यमा कफ लिन तयार छैन। म त्यहाँ पुग्छु, म वचन दिन्छु। एक हप्ता वा सो भन्दा मा, म एउटा प्रतियोगिता चलाउन जाँदैछु र अपठित हार्डकभरहरूको बक्स दिनेछु ... अझै उनीहरूको प्लास्टिकमा। वरिपरि छडी!
जे भए पनि ... कागजको भावनालाई जति माया गर्छु, त्यहि बर्ष पछि अखबार पढ्न छोडिदिएँ। म कुरा गर्दै थिए जोन केट्जेनबर्गर, एक स्टार व्यवसाय रिपोर्टर (pun उद्देश्य) को बारे मा एक हप्ता वा अघिल्लो। जब पत्रकारिता उत्पादनबाट विज्ञापन बीचको फिलरमा परिवर्तन भयो तब म अखबार किन्न रोकें।
मैले अखबारहरू किन्न बन्द गरें जब अखबारहरूले विज्ञापन सुरू गरे कतिवटा कूपन आइतवार संस्करणको सट्टामा कति समाचार कथाहरू तिनीहरूले फेला पारे। यो अझै मलाई दुखद। यदि यो जोनको स्तम्भको लागि नभएको भए मलाई यकिन छैन कि म कहिले पनि इन्डियानापोलिस स्टार पनि अनलाइन पढ्छु।
त्यहाँ अझै एउटा प्रिन्ट प्रकाशन छ जुन म खोल्न र खुल्ला भाँच्न प्रतीक्षा गर्न सक्दिन, यद्यपि ... र त्यो हो वायर्ड पत्रिका। मैले वर्षौं पहिले सदस्यता रोक्दा जब उनीहरू ठूला चित्रहरू, साना प्रिन्टमा सरेका छन् ... तर बर्षको अन्तिम जोडी अविश्वसनीय भएको छ। कुनै आर्टसी फ्लफ छैन - हरेक लेख एक पृष्ठ टर्नर हो। त्यहाँ धेरै थोरै संस्करणहरू छन् जुन म आवरणबाट कभर गर्न निषेध गर्दछु। मैले गत बर्ष पढें र याद गरे पनि मैले वायर्ड लेखहरूको बारेमा ब्लग प्रत्येक २ देखि months महिनामा एक पटक गर्दछु।
यो महिनाको वायर्ड पत्रिका:
जीपीएस क्रान्ति भित्र: १० अनुप्रयोगहरू जुन अधिकतम स्थान बनाउँदछ
द वायर्ड प्रेसिडेन्सी: के ओबामा वास्तवमै व्हाइट हाउस रिबुट गर्न सक्छन्?
Google लाई मार्नको लागि प्लट
DIY DNA: एक जना बुबाको छोरीको आनुवंशिक कोड ह्याक गर्न को लागी प्रयास
ब्रोडब्यान्डको गाढा भगवानले Comcast को छवि ठीक गर्न कोसिस गर्दछ
किनकि यी लेखहरू अब अनलाइन छन्, म तपाईंलाई वास्तवमै चुनौती दिन्छु कि यी लेखहरू पढ्न। यदि तपाईंको दिन ब्लग पोष्टहरू पढ्ने भरिएको छ र तपाईं ती मध्येका एक हुनुहुन्छ कि किन हामीलाई अब पत्रकारहरू चाहिन्छ भनेर आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ भने, यी लेखहरू मध्ये कुनै एकले तपाईंको दिमाग परिवर्तन गर्नुपर्दछ। हेरचाह र लेख लेख्न को लागी पेज… एर ... स्क्रिन बन्द छ।
जब म राम्रो हार्डकओभर पुस्तकको लागि कति तिर्ने गर्छु र वायर्ड म्यागजिनले कति खर्च गर्छु भनेर विचार गर्दा - म किन मेरो सदस्यताको लागि अधिक तिर्ने छैन भनेर अचम्म लाग्छ। बजारमा एक पनि पत्रिका छैन जुन मेरो ध्यान समेट्छ र टेक्नोलोजी क्षेत्रको साथ साथै वायर्डमा भारी रिपोर्ट गर्दछ।
म अर्को महिनाको तार सम्म प्रतीक्षा गर्न सक्दिन!
टैग: बानी किन्नसञ्चार रणनीति
Day दिन इन्टरनेटबाट हरायो
मार्केटिंग ईन्टेन्ट गर्न, आईबोर्सलाई होइन
जनवरी 27, 2009 मा 3: 02 एएम
म आफैं वायर्डलाई प्रेम गर्छु तर फेरि सम्बन्ध बन्द गरी सकेको छु। म हाल यो पढ्दै छु।
जनवरी 29, 2009 मा 2: 13 एएम
वायर्ड केवल एक मात्र हो जुन मैले पनि अडिग पारें। यद्यपि म एक गेमर हुँ र गत २ बर्ष वा सो भन्दा बढि गेम इन्फोर्मर पाएको छु, तर यो केवल किनभने यो गेम स्टप छुट कार्डको साथ आउँछ।
जनवरी 29, 2009 मा 11: 37 एएम
हाम्रो ब्लग (www.inmedialog.com) का नियमित पाठकहरू जान्दछन् कि हामी पत्रकारितामा उत्कृष्टताको समर्थक समर्थक हौं जुन ढाँचाको फरक पर्दैन। म उनीहरूसँग सहानुभूति दर्साउँछु जो दोस्रो वा तेस्रो दरको घर-शहर दैनिक समाचारपत्रमा ग्रस्त हुनुपर्छ; त्यो निश्चित रूपमा क्यानाडाको ओटावामा छ जहाँ स्थानीय रैग तल कर्पोरेट मिडियाको स्वामित्व रेसिंगको एक अभूतपूर्व मामला हो।
हामी भाग्यशाली छौं, यद्यपि हामीसँग एउटा उत्कृष्ट राष्ट्रिय दैनिक अखबार, ग्लोब एन्ड मेल छ जुन बिहान सबेरै मेरो ढोकामा अवतरण गर्दछ। यो २ life बर्ष भन्दा बढी समयदेखि मेरो जीवनमा अगाडि-पछाडि आवश्यक पढाइ रहेको छ। यो संसारको एक धेरै उत्तम अंग्रेजी भाषाको अखबार को रुपमा छ।
प्रत्येक दिन ग्लोब पढ्दा मलाई अन्य पत्रिकाहरूको लागी त्यति समय लाग्छ किनकि तपाईको आत्म-कबूल गरिएको हार्ड-बैक व्यसन, डग्लस, तर म वायर्डमा तपाईंको स्नेह बाँड्छु। व्यवसाय २.० अन्तर्गत यो मेरो पहिलो प्रविधि पत्रिका भएको छ। (तपाईले २.० को लागी मेरो अवलोकन यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ: http://inmedialog.com/index.php/archives/a-business-20-titan-bows-out/) यसमा ग्याजेट र गीक सामानहरू छन् र यसको व्यापारको २.० भन्दा थोरै हुन्छ, तर लेखोट उत्कृष्ट छ, सुविधाहरू प्रायः राम्ररी अनुसन्धान गरिन्छ र सोचविचार हुन्छन् र जब म यसको अन्त्य गर्दछु, प्रत्येकसँग। मुद्दामा धेरै पृष्ठ कुनाहरू पछाडि फर्केको छ जुन मलाई त्यस पृष्ठमा लेखिएको बारे थप जाँच गर्न सम्झना गराउँदछ।
हामी हरेक हप्ता हाम्रो टेक-फोकस गरिएको PR एजेन्सीलाई डेलिभर गर्ने स्कोरहरू पाउँछौं; वायर्ड मात्र एक कर्मचारीलाई आदेश गरिएको छ यो आईपुग्ने बित्तिकै मेरो डेस्कमा राखिनु पर्छ।
जनवरी १, २०१ 29 १२::2009 अपराह्न
म लगभग or वा years बर्ष पहिले द ग्लोब र मेलको साथ काम गर्न सक्दछु र तपाईंको मूल्यांकनसँग सहमत छु। ग्लोब, त्यस समयमा, त्यहाँ पुग्न धेरै चिन्तित थियो दायाँ दर्शकहरू… कागज किन्न सक्ने जो कोही पुग्दैन। उनीहरूले छुट पाउन पनि छोडेन - यी सबैले धेरै बढी कथित मूल्यको साथ अखबार प्रदान गर्दछ। ग्लोब र मेलले वाल स्ट्रिट जर्नललाई विश्वको सब भन्दा राम्रो व्यापार अखबारको रूपमा पार गर्न सक्छ। यो एक महान कागज र एक महान संगठन हो!
कुराकानीमा थप गर्नुभएकोमा धन्यवाद!